U-Alexis Ravelo: «Izincwadi zingakusiza ukuthi ubuze imibuzo efanele mayelana neqiniso» | Izincwadi Zamanje
Isithombe: Ikhava lika-Alexis Ravelo ku-Twitter
U-Alexis Ravelo inoveli entsha, Umfana onesikhwama ekhanda lakhe, eyaphuma ngoSepthemba. Umbhali we Izikhathi ezimbi kakhulu, Isu likaPekingese (Umklomelo kaHammett weBest Black Novel), Izimbali azopha (2015 iBlack VLC) o Impumputhe yenkalankala, phakathi kwabanye abaningi, umbhali ohlonishwayo ovela eGran Canaria ushiye isikhashana epake kuye U-Eladio Monroy ukusitshela le ndaba. Wena ngibona kakhulu umusa wakho nesikhathi esinikezelwe kulokhu ingxoxo.
Evela eLas Palmas de Gran Canaria, wafunda Ifilosofi emsulwa futhi waya emihlanganweni yokufundisana enikezwe nguMario Merlino, u-Augusto Monterroso no-Alfredo Bryce Echenique. Ungumbhali wezindaba ezimfushane nokunye okuningi kwezingane nentsha. Futhi ukwazile ukwenza i- igebe elibaluleke kakhulu esigcawini samanje semibhalo namanoveli akhe ngu ubulili obumnyama.
U-ALEXIS RAVELO: Angisayikhumbuli eyokuqala engiyibhalile. Izincwadi zami zokuqala zazingu amahlaya kanye neqoqo lamavolumu ahambisana ne- i-encyclopedia Umthetho 2000, leyo abazali bethu abayithenga kancane kancane. Babenesihloko esivamile Dime... Ake ungitshele ukuthi kwenzeke nini, Ake ungitshele ukuthi ungubani, Ngitshele ukuthi umsebenzi wami uzoba yini… Lokho ngiyakukhumbula, inoveli yokuqala ukuthi Ngifundile Kwakungukuguqulwa kwengane kwe- Emhlabeni jikelele ngezinsuku ezingamashumi ayisishiyagalombili.
AR: Ngicabanga ukuthi incwadi yokuqala engishayile kwaba Ukuguqulwa komzimba. O UshintshonguFranz KAFKA, njengoba manje isihunyushwe ngokunembe kakhudlwana. Ngifunde udaba isingeniso sikaBorges nangokuhlaziywa nguVladimir Nabokov okwathi, emuva kweminyaka, ngathola ukuthi kwakuyingxenye yakhe Inkambo yezincwadi zaseYurophu. Ukuqonda ukuthi kungani kungithinte, kuzofanele sinake izimo engizifunde kuzo. Mina Ngangisemusha, Ngifundile, kodwa futhi kusebenze vele njengoweta endaweni yokucima ukoma (bekufanele ubeke imali ekhaya). Ngangifunda ebusuku kuze kuse, ngoba ngihlale ngihlushwa ukuqwasha.
Ake ungicabange, ngikhathele ngemuva kokusebenza usuku lonke, egumbini elincane lendlu encane, ngifunda indaba kaGregorio Samsa, ngaphenduka ibhungane futhi ngikhathazekile ngokuya emsebenzini ukubeka imali ekhaya nokuthola ukuthi, empeleni labo Bathe bayayidinga ukuze baphile, abayidingi kangako. Ngangiqala ngqa ukukuqonda lokho izincwadi zingakusiza ukubalekela iqiniso, kepha lokho kungcono kakhulu lapho, ngaphezu kwalokho, kukusiza ukukuqonda noma, okungenani, ukuzibuza imibuzo efanele ngakho.
AR: Kuningi. Futhi into incike kakhulu ekuthandweni nasezifisweni kunamanani akhombisayo. Kepha kukhona abanye engihlala ngibuyele kubo: URulfo, uCortázar noBorges, uma ngifuna okuhle indaba. Ekuzilolongeni, ngivame ukuphinda ngifunde USusan Sontag, a UBarthés uya Eddy (Akukhona nje ukuthi babenengqondo enamandla, izitayela zabo zinomona.) Ngefayela le- izimbongi Nginezinsuku, kepha ngokujwayelekile ngibuyela kuPedro García Cabrera, eCesare Pavese, a U-Olga Orozco.
Okuxubile ababhali bamanoveli izintandokazi nazo ziyashintsha njalo: kwesinye isikhathi Cormac mccarthy, kwesinye isikhathi UJoyce Carol Oates, kwesinye isikhathi Erskine Caldwell. Kepha ngiphinda ngifunde kaningi U-Onethi, engikuthola ngokuphelele ukulutheka. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi uba nomzimba wekhulu leshumi nesishiyagalolunye, bese uzinikela ekufundeni kabusha IGaldos (kulo nyaka bekungenakugwenywa), UFlaubert noma uVictor Hugo.
AR: Mhlawumbe Bengingeke ngithande ukuhlangana nanoma yikuphi: umlingiswa, ukuze abe namandla, kufanele abe nezinhlungu eziningi eziseduze kwakhe, kanti eyodwa, ukuze athole induduzo, imvamisa ikhetha ukuba kude nezigameko ezibuhlungu. Ngokuqondene nokuzidala, Ngingathanda ukwakha umlingiswa ofana nalowo ka UJean ValJean, of Abadabukisayo.
AR: Baningi. Ukubhala, okusemqoka ukuthi kube ne- close ikhofi. Futhi, ukufunda, ngisebenzisa ipensela, ngani Ngidwebela futhi ngiyakwenza amanothi kumakhophi ami. Kungakho ngincamela papel.
AR: Ekhaya sine- ukuthumela engihlanganyela nomlingani wami. Imvamisa ngisebenza ku ekuseni.
AL: Yini esiyitholayo kwinoveli yakho yakamuva, Umfana onesikhwama ekhanda lakhe?
AR: Yebo, lokho okushiwo yisihloko, ngoba kumayelana nomuntu obanjwe inkunzi washiywa ekhanda esikhwameni. Umfundi ufunda i- I-monologue yangaphakathi Ngale ndlela le ndoda ibukeza impilo yayo, izama ukuthola ukuthi ngubani owenze lo msebenzi noma wayala ukuthi wenziwe. Kuba yi uhlobo lokwakhiwa kabusha yamanoveli ami obugebengu abamnyama, agxile kulokhu kumuntu ovame ukudlala indawo yomphikisi, we, ake sithi, "isikhohlakali" kuzo.
AL: Izinhlobo zemibhalo ezithandwa kakhulu?
AR: Iqiniso lelo Ngifunde yonke into, Anginakho ukucwasa. Ngingajabulela okufanayo ngenoveli eqanjiwe yesayensi ngendaba esondele futhi enothando. Okubalulekile kimi ukuthi incwadi ibhalwe kahle futhi lokho kungenza ngizibuze imibuzo.
AR: Kulezi zinsuku ngifunde Iwashi likaClío, ngu-Emilio González Déniz, umbhali weGran Canaria engimthanda kakhulu futhi obesenesikhathi eside engashicileli. Y Ngisebenza kwinoveli yesithupha yochungechunge ngu-Eladio Monroy.
AR: Njengenjwayelo: ababhali abaningi namathuba ambalwa. Kepha uma umbhalo unekhwalithi, uhlala ugcina ngokuthola umhleli wawo futhi ufinyelele kubafundi okufanele abafinyelele.
AR: Ngicabanga ukuthi kusesekuseni kakhulu ukuyihlaziya. Angisebenzi ngezindaba ezivuthayo, kepha ngicabanga ngesikhathi esiphakathi izingqinamba engibhekana nazo. Ngakho-ke angazi okwamanje uma okwenzekayo kungangizuzisa ngobuciko.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » U-Alexis Ravelo: "Izincwadi zingakusiza ukuthi ubuze imibuzo efanele mayelana neqiniso".